မြန်မာဖောင့် (Myanmar Font) ပြဿနာများ
မြန်မာဖောင့် (Myanmar Font) ပြဿနာများ
Thread: မြန်မာဖောင့် (Myanmar Font) ပြဿနာများ
08-27-2015 06:36 AM #81
Pyin Oo Lwin(UT-YCC)
window 8.1 မှာ facebook app သုံးတာ zawgyi font နဲ့ရေးတာဆိုရင် မမြင်ရပဲ unicode နဲ့ရေးထားတာမှ ဖတ်လို့ရတယ် ....ခက်တာက မြင်ရတာက unicode... ရေးတော့ zawgyi ဖြစ်နေတယ် .... စက်မှာ myanmar3 ကော zawgyiကော တင်ထားတယ်... firefox မှာသုံးရင် font ပြောင်းသုံးလို့ရတော့ အဆင်ပြေတယ် ...facebook app မှာ zawgyi ဖတ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ... သိတဲ့အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ပြောပေးကြပါဦး
The Following User Says Thank You to nayminthar For This Useful Post:
09-09-2015 09:05 AM #82
Thanked 1,970 Times in 444 Posts
အခုချိန်မှာမြန်မာယူနီကုဒ်က အားလုံးအဆင်ပြေနေပါဘီ။ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ google, microsoft တွေက ယူနီကုဒ်ကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး အဲဒီဖောင့်တွေကိုပဲ အသုံးပြုမှာပါ။ Google ကထုတ်တဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Nexus Series, moto g, moto x စတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ 5.0 နောက်ပိုင်း OS တွေမှာ ယူနီကုဒ်ကိုပဲ သုံးထားပါတယ်။ microsoft win 8.1 and 10 မှာလဲ မြန်မာယူနီကုဒ်တခါတည်းပါလာပါတယ်။ အဲဒါမို့လို့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတာကို မမြင်ရတော့တာပါ။
အွန်လိုင်း File Sharing လုပ်ဖို့အတွက် ဒီနေရာလေးကနေ 2GB Space ရှိတဲ့Dropbox Account ကိုရယူနိုင်ပါတယ်...
The Following2Users Say Thank You to ချင်းတွင်းသား For This Useful Post:
09-10-2015 10:15 PM #83
ကျွန်တော်က text file(မြန်မာလို)ကို pdf ပြောင်းတာ english လိုပဲပေါ်ပြီးတော့မြန်မာလိုတော့တစ်လုံးမှမပေါ်ဘူးဗျာ။အဲဒါမြန်မာလို(zawgyi font)ကောင်းကောင်းပေါ်တဲ့ software ရှိရင်တင်ပေးပါဗျာ။ကူညီကြပါဦး။ ကျေးဇူပါ။
12-31-2017 11:42 AM #84
Thanked 337 Times in 133 Posts
While I was taking Burmese Assessment for Subtitling, I found it difficult to see the font( Zawgyi1) I typed which is supported by desk.com.
12-31-2017 11:45 AM #85
အစ်ကိုပြောတဲ့ မြန်မာယူနီကုတ်ဆိုတာ font name တခုလား
12-31-2017 12:22 PM #86
ကိုချင်းတွင်းသားပြောတာကိုမှတ်ပြီး unicode install လုပ်လိုက်တာ မြန်မာစာပြန်မြင်ရပါပြီ
Thank you ပါ
Quick Navigation အခြားအခက်အခဲများ Top
ဆိုဒ်တခုထဲဝင်ကြည့်တာ မြန်မာဖောင့် မပေါ်လို့
By မောင်သုည in forum အခက်အခဲများ
Last Post: 11-18-2010, 05:35 AM
myanmar font and window phone
By otomo in forum အခြားအခက်အခဲများ
Last Post: 10-07-2010, 01:55 AM
chatbox ထဲတွင်မြန်မာဖောင့် ပျောက်သွားခြင်း Urgent !!
By ငမောင် in forum အခက်အခဲများ
Last Post: 06-15-2010, 07:58 AM
All times are GMT +6.5. The time now is 08:36 PM.